India : Bebe Sy Zafikely Vavy Miaraka Manao Fampitambaovao Mahafinaritra · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 01 Jolay 2016 4:09 GMT
Vakio amin'ny teny Español, русский, Ελληνικά, မြန်မာ, English, عربي, Français, 繁體中文, English
Vavy antitra iray manao aron'akanjonà labaoratoara no manatrika fakàntsary. Dr Indri Pickle no anarany, ary hazavainy amin'ny mpijery ny fomba fanaovany manga alòna izay ankafizin'ny olona any amin'ny firenena any Azia Atsimo. Soratany eo amin'ny solaitraben'ny Pickle Lab ny raikipohy fototra : masoandro + manga.
84 taona izao i Dr. Indri Pickle. Inderjit Kaur no nafohezina hoe Indri, tsy tena manampahaizana manokana momba ny manga alòna izy. Ao aminà lahatsary izay vao nampiakarina vao haingana ao amin'ny Youtube no ilalaovany. Amin'ny alàlan'ny fanampian'ireo fitaovan'ny haino aman-jery sosialy toy ny YouTube, bilaogy, Twitter ary Facebook – ary koa ny zafikeliny vavy Jasmeen Patheja — no anatanterahan'i Indri ireo nofinofiny ho tonga mpilalao sarimihetsika.
Te-hianatra ny fomba fakàna sary sy fanaovana lahatsary i Jasmeen, izay mpanakanto, mpiaro ny miralenta sady mpamorona ny Blank Noise, kanto iarahan'ny vahoaka sy ny fiarahamonina mientana, izay tojo ny filàna sotasota amin'ny vehivavy eny an-dàlambe. Ny renibeny, te-ho tonga mpilalao sarimihetsika, no lasa mpilalao an-tsitrapo sy mpiara-miasa aminy. Ankoatry ny lahatsarin'ny Pickle Lab dia niaraka namokatra fampisehoana andian-tsary mifototra amin'ny toetoetry ny olona nofidian'i Indri holalaovina ry zareo.
Zarain'i Indri ao amin'ny bilaoginy ihany koa ny tantaram-piainany. Tantarainy ao amin'ilay lahatsoratra fa teraka sy lehibe tany Birmania izy ary tsroany ireo fanafihan'ny Japoney nandritra ny Ady Lehibe faharoa tamin'ny fahazazany. Tantarainy ny dia lavitrezaka nataon'ny fianakaviany mba hifindràna any India (Lahore) tamin'ny 1941. Niverina tany Magok, Birmania izy taorian'ny Ady Lehibe Faharoa. Nanambady i Indri rehefa 19 taona ary niaina tany Birmania hatramin'ny 1970.
Nianatra tamin'ny sekoly fianarana zavakanto, tamin'ny sampana sary/ kanto iombonana ihany koa aho. Ny fanirian'i Indri ho mpilalao sarimihetsika no niandohan'ny fiaraha-miasa. Nitarika ho amin'ny fifanakalozana izany hevitra izany. Nahaforona fampisehoana andian-tsary mifototra amin'ny toetran'olona tian'i Indri holalaovina izany. Teraka tamin'ny lalao, ny kiry ary ny faniriana ilay fiaraha-miasa. Mpanjaka vavy, mpanao politika, mpahay siansa no nasehon'ilay fampisehoana.